သစ်ဆန်းခန့်: အမေး အဖြေ ကဏ္ဍ
ဒီအမေး အဖြေ ကဏ္ဍလေး လုပ်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော့် သစ်ဆန်းခန့် ဘလော့ဂ် မှာ ပိုစ်တွေပဲ တင်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ စာဖတ်သူများ ရဲ့ အမေး စကား များကို ဖြေကြားဖို့အတွက် မလုပ်ခဲ့မိဘူး ချက်ဘောက်မှာ လဲ အမှာစာရေးထားတဲ့ ဆောဖ်ဝဲလ်တွေလောက်ပဲ တင်ပေး နိုင်ခဲ့တယ် ချက်ဘောက်မှာ အယ်ရာဖြစ်လို့ လာမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပိုစ်တစ်ခုအနေနဲ့
ဒါကြောင့် အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ တစ်ခု အနေနဲ့ ဒီနေရာလေးမှာ ကွန်မန့်တွေ ပေးခဲ့မယ်
ပြီးတော့ ဆက်သွယ်ရန် Email တစ်ခုခုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်
အကယ်၍ အရေးကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖုန်းဆက်မေးလို့လဲ ရပါတယ်
မေးချင်သမျှ မေးပါ ဖြေကြားပေးဖို့ အသင့်ပါပဲခင်ဗျာ..
သိလိုသမျှကို အောက်မှာ ကွန်မန့် ပေးခဲ့ပါ ကျွန်တော် အချိန်ရတာနဲ့ တစ်ခုချင်းစီ လိုက်စိစစ်ပြီး
သစ်ဆန်းခန့် ဘလော့ဂ် ကို ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့
Nann Sandi MoonJuly 21, 2012 at 9:42 PMအစ်ကိုရေ...Mobile Application Developer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်လဲ သိချင်ပါတယ်အခြေခံကနေစပြီး ဘာတွေ သိထားရမလဲပေါ့..ကျေးဇူး..ကျေးဇူး..နော်ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်July 25, 2012 at 8:38 AMညီမရေ Developer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ပရိုဂရမ်မင်း ကို ပိုင်နိုင်ရမယ် ပြီးရင်ဆောဖ်ဝဲလ်တွေကို ကိုယ်တိုင် တီထွင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်...အခြေခံကတော့ သူများထွင်ထားတဲ့ ဆောဖ်ဝဲလ်တွေကစပြီးတော့ လေ့လာပါပညာအများဆုံး ရမယ့် အွန်လိုင်း လိပ်စာတွေကို ညွှန်ရရင်တော့..မြန်မာပြည်မှာဆို www.myanmarmobileapp.comနိုင်ငံတစ်ကာမှာဆိုရင် http://forum.xda-developers.com/တွေမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်..တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေဗျာ...DeletePhyo aungkyawMarch 15, 2013 at 3:09 AMsamsung galaxy mini ကို offical firmware jelly bean တင်ချင်လို.ပါ။ကူညီပါဦးDeleteReplythar tharOctober 14, 2012 at 12:28 AMအကိုရေ ကျွန်တော်ဖုန်းက က U8818 ပါ WLAN သုံးလို့ မရဘူး ဘာလိုနေလဲ မသိဘူး WLAN မှာဘာတွေပြင်ရသေးလဲ မသိဘူးsetting မှာလည်းဘာမှာမပေါ်ဘူး အကိုရေကူညီဘာနော်လေးစားစွာဖြင့် သားငယ်ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်October 25, 2012 at 3:24 AMအဲ့ဒါဆိုရင် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပြန်ရေးလိုက်ရင် ကောင်းသွားမှာပါ ခင်ဗျာDeleteReplyAnonymousOctober 23, 2012 at 6:05 AMကျွန်တော်က Programming ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ Web Programming ထက် Software ရေးတဲ့ Programming ကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘယ် Language ကို စပြီး လေ့လာရင် ကောင်းမလဲ? HTML ကိုတော့ အနည်းအကျဉ်း ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် HTML နဲ့ သိပ်ပြီး မကွဲပြားတဲ့ Software Programming ကို လေ့လာရင် ပိုလွယ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အကြံပေးပါအုံး။လေးစားလျက်…PeterReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်October 25, 2012 at 3:29 AMEnglish Language နဲ့ တရုတ်စာကို အဓိက လေ့လာပါဆောဖ်ဝဲလ်ရေးဖို့ ဆိုရင်တော့Java နဲ့ C++ ပိုင်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာမှာပါ...DeleteReplysawnayaung@shwe leeNovember 5, 2012 at 7:02 PMhuawei t8600 အတွက် root လုပ်နည်းလေးတင်ပေးပါဦးညီ။ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:20 PMRoot_with_Restore_by_Bin4ry_v13 နဲ့ ရပါတယ် ကျွန်တော် အဲ့ကောင်လေး ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်DeleteReplyAnonymousNovember 6, 2012 at 6:50 AMROOTလုပ်ရခြင်း၏ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများသိချင်ပါတယ်။ကျွန်တော့်ဖုန်းHUAWEI C8800မှာPOWERဖွင့်တိုင်းRESTARTသာကျနေ၍ဆိုင်သွားပြတာFIRMWAREပျက်သွားလို့ဆိုပြီး15000ပေးရပါတယ်။ဘာကြောင့်FIRMWAREပျက်သွားတာလဲ။အမြဲအားပေးလျှက်ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:22 PMRoot လုပ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာဖောင့်အပြင် Root တောင်းတဲ့ ဆောဖ်ဝဲလ် ဂိမ်းများကို ဆော့ကစားနိုင်ပြီးတော့Root လုပ်ခြင်းဖြင့် သူ့လိုင်စင် ကျိုးပျက်သွားလို့ အပြင်က ၀င်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို မကာကွယ်ပေးတော့ပါဘူးဒါကြောင့် ဖုန်းဟန်းတာတွေ ပါဝါပိတ်သွားတာတွေ ဖြစ်တက်ပါတယ် အခုဆိုရင် Root မလုပ်ပဲ Font သွင်းနည်းတွေရှိလာပါပြီ အချိန်ရရင် ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်DeleteReplyAnonymousNovember 6, 2012 at 11:54 PMကျနော်ဖုန်းက Huawei 8818 ပါ။ root လဲလုပ်ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် Viber တင်မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ version စုံအောင်စမ်းကြည့်ပေမယ့် install လုပ်တိုင်းလဲ Application not installed ပဲ ပြနေတယ် ကူညီပါဦးခင်ဗျာ....ReplyDeleteRepliesShaneNovember 27, 2012 at 7:26 PMအစ်ကိုဖုန်း က ICS တင်ထားတာလား 2.3.6 ဘဲလာှးုICS တင်ထားတာဆိုရင် ကျွန်တော်ဆီမှာ ICS Viber apk ရှိတယ်www.facebook.com/shwethazincomputer မှာ down လိုက်နော်DeleteAnonymousDecember 1, 2012 at 7:02 AMဟုတ်တယ် ညီလေး ICS တင်ထားတာ.. ပေးတဲ့လင့်မှာ ရှာတာ မတွေ့လို့ လုပ်ပါဦး ကျေးဇူးပါ...Deleteသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:23 PMViber အတွက်ကို ဒီဆိုက်မှာပဲ တင်ပေးထားပါတယ် Android App မှာ ရှာဖွေကြည့်ပါDeleteReplyBunny PhyoNovember 9, 2012 at 1:33 AMကျနော့်ဖုန်း samsung galaxy s advance (GT-I9070)ကို android version 2.3.6 ကနေ jelly bean offical ထိမြှင့်ချင်ပါတယ် ခဗျ ဆိုင် ပို့ရတာ အခက်အခဲရှိလို့ပါ အိမ်မှာပဲcomputer နဲ့လုပ်ချင်ပါတယ်ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:25 PMဗားရှင်းအမြင့် မရှိသေးပါ Jelly အနေနဲ့တော့ Custom Rom ထွက်လာပေမယ့် Error ရှိလို့ ကျွန်တော် တင်မပေးသေးတာပါရှာဖွေနေပါတယ် စောင့်မျှော်ပါအုံးDeleteReplyAnonymousNovember 10, 2012 at 5:59 AMကျွန်တော့ဖုန်းကCDMA-800ဖုန်းပါ။HUAWEI C8500 ပါ။ဗားရှင်းက2.1ပဲရှိပါတယ်။ငတက်ဖျားဂိမ်းကစားချင်ပေမယ့်ကစားလို့မရဘူးအကို။ဒါကြောင့်ဗားရှင်းမြှင့်ရမလားမြှင့်လို့ရောရပါ့မလား။ဒါမှမဟုတ်firmwareပြန်လုပ်ရမလားသိချင်ပါတယ်။ကျွန်တော့်ဖုန်းနဲ့ကိုက်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလေးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်လျက်....ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:34 PMသူ့အတွက် အမြင့် တရားဝင် မထွက်သေးပါဘူး Error ကင်းတဲ့ Custom Rom တွေ ရှာနေပါတယ် ရရင် တင်ပေးပါ့မယ်DeleteReplyLinn AungNovember 11, 2012 at 4:24 PMကျွန်တော်ကွန်ပြူတာက maxthon 3browser ကိုinstall လုပ်ထားတယ်ဗျာ အရင်ကမြန်မာဖောင့်တွေမြင်ရတယ် ခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ကျန်တာအကုန်မြင်ရပြီး facebook မှာကျတော့အတုံးလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဗျာ ကူညီပါဦးReplyDeleteRepliesyelinn myatNovember 13, 2012 at 1:03 AMအဲဒီအတွက် ကျတော်တို့ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက Internet Explorer ရဲ့ Tool ထဲက Internet Options ကို အဆင့်လိုက်ဝင်ပြီး Internet Options Box ကျလာပြီဆိုရင် အဲဒီ Box ရဲ့ အောက်မှာ Fonts ဆိုတဲ့ ဘားလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်... အဲဒီမှာ Zawgyi Font ကိုအရင် Change ကြည့်လိုက်ပါ... ဒါမှ မြန်မာစာမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ maxthon Browser ရဲ့ Tab Options ( Browser ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားက တြိဂံ အတုံးလေးကိုပြောတာပါ) ထဲကိုသွားလိုက်ပါ... အဲဒီ Tab Options ကျလာပြီဆိုတာနဲ့ အောက်ဘက်က Advanced ကိုဝင်လိုက်ပါ... အဲဒီမှာ Web Page Font ဆိုတာရှိပါတယ် အဲဒီမှာ Zawgyi Font ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ... ဒါဆိုရင် Facebook ပဲဖြစ်ဖြစ် Gmail ပဲဖြစ်ဖြစ် Wab Page မှန်သမျှမြန်မာလိုမြင်ရပါပြီ...*** ဘယ်အချိန်တက်လိုက်တယ်မသိပေမယ့် အခုလိုမေးထားတဲ့ပို့စ်လေးကို ကျတော် ဒီနေ့ ကိုသစ်ဆန်းခန့်ရဲ့ဆိုဒ်ထဲဝင်ဖြစ်မှတွေ့လိုက်တာပါ... ဒါကြောင့် ကျတော် သိသလောက်လေး ပြန်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ... အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ကျတော့် ရဲ့ yelinn.kme@gmail.com ကို mail ပို့ပြီးတော့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ...***Deleteသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:36 PMyelinn.kme@gmail.com ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော် မအားလို့ မ၀င်ဖြစ်ရင်ကူညီပြီး ဖြေပေးပါအုံး...DeleteReplyyelinn myatNovember 13, 2012 at 1:08 AMကိုသစ်ဆန်းခန့် ရေ... ကျတော့်ကို တစ်ခုလောက်ကူညီပါအုံးဗျာ...ကျတော် မသိတာလေး တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ....ကျတော့်ရဲ့ ဖုန်း Root လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာလေး သိချင်လို့ပါ... ကိုသစ်ဆန်းခန့်တင်ထားတဲ့ ပို့စ် တွေထဲမှာကျတော်အကုန်ရှာကြည့်ပြီးပါပြီ.... မတွေ့လို့ပါ...ကျတော့် ဖုန်းက OPSSON iMO 1000 ပါ Android Version က 2.3.6 ပါ... ကူညီပါအုံးနော် ကိုသစ်ဆန်းခန့်.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:19 PMRoot_with_Restore_by_Bin4ry_v13 နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ အစဉ်ပြေသွားမှာပါDeleteyelinn myatMarch 8, 2013 at 7:31 PMကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်... ကိုသစ်ဆန်းခန့်ရေ... အဆင်ပြေသွားပါပြီဗျာ... တစ်ခြားသူတွေကိုလဲ ဒီ Root Tool လေးကို ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါ့မယ်... ကျေးကျေး... :)DeleteReplyMyo Min HanNovember 14, 2012 at 8:52 AMကျွန်တော့် s2 က bluetooth ဖွင့် လိုက်ရင် restart ကျ ပြီး logo မှာပဲ loop ဖြစ်နေပါ တယ် .... help meReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:37 PMS2 ရဲ့ မော်ဒယ်နံပါတ်လေး တစ်ချက်လောက်ပေးပါ Firmware ပြန်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..GT-i9100GT-i9100TGT-i9100GGT-i9100iအဲ့လိုတွေ ရှိပါတယ်DeleteReplyAnonymousNovember 15, 2012 at 9:35 AMအကိုရေ HUAWEI U9200ရဲ့ 4.1.1jellybean firmware ကိုပြန်တင်ပေးပါလားအကိုအစဉ်လေးစားလျက်ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:38 PMဟုတ်ကဲ့ပါ သေချာပေါက် ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်DeleteReplyKo NgeNovember 16, 2012 at 6:33 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteKo NgeNovember 16, 2012 at 6:56 AMအကိုရေ samsung galaxy tab2 7" modle GT-P3100 mail ထဲမှာမြန်မာစာဖတ်လို့မရဘူး အတုံးလေးတွေပေါ်နေတယ်ကူညီပါအုန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .... kongelay701@gmai.comွReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:39 PMRoot ပြီး မြန်မာဖောင့် ချိန်းပြီးမှ မြင်ရမှာပါခင်ဗျာဒါကြောင့် Android Root ဆိုတဲ့ ဒီဆိုက်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရှာကြည့်ပါ လုပ်နည်းတင်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ...DeleteReplyye min htetNovember 17, 2012 at 7:22 AMHuawei U8812Dကို င်္Firmware မြှင့် လို့ ရလားအစ်ကိုReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:39 PMCustom ထွက်ပါပြီ Jelly ပေါ့ Error တွေ ရှိနေနိုင်လို့ ခနစောင့်ကြည့်နေတာပါDeleteReplyaungNovember 21, 2012 at 8:38 PMbro,may i know download link for u9200 b118 original boot image.ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:41 PMရှိပါတယ် ကျွန်တော် တင်ပေးပါ့မယ်DeleteReplyshaneNovember 27, 2012 at 7:29 PMအစ်ကိုရေHuawei U 8650 ကို ICS Firmware တင်ချင်လို့ပါအဲ့ဒါ u8650 အတွက် ICS Firmware များရှိမလား ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:41 PMမရှိသေးပါဘူး Custom Rom ပဲ ရှိပါတယ် Jelly အထိ ထွက်နေပါပြီ တင်ခြင်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုစ်တင်ပေးပါ့မယ်DeleteReplykomyat minNovember 30, 2012 at 7:07 AMအကိုရေ ကျွန်တော့ဖုန်းက u8825D ပါ ဘာကြောင့်မှန်းမသိဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်တစ်ခုလုံး Touch ကအလုပ်မလုပ်တော့ပါ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမယ်မသိတော့ဘူးဖြစ်နေပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါနော်ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:42 PMအဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ အဖြစ်များဆုံး Error ပါပဲ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်နဲ့ ဆိုင်လို့ ဆိုင်သာ သွားပြလိုက်ပါDeleteReplykophyoheavenNovember 30, 2012 at 7:25 AMကိုသစ် samsung galaxy next turbo GT-s5570i ကို ics တင်ချင်လို့ကူညီပါဦးကိုသစ် ဒီထက်မကအောင်မြင်မှုရပါစေReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:43 PMရှာပေးထားပါ့မယ်DeleteReplyangleDecember 3, 2012 at 10:18 AMsgReplyDeletemonlayDecember 3, 2012 at 10:24 AMညီမဖုန်းက galaxy ace2 ပါဖုန်းကappliaction အသစ်သွင်းလိုက်တိုင်း လေးသွားပြီးforce closeဘဲတက်လာကါတယ် ဖုန်းလာရင်လဲတစ်ဖက်ကအသံကိုဆယ်စက္ကန့်လောက်နေမှကြားရပါတယ် ဝယ်တာလဲမကြာသေးပါဘရှင် အကိုအကြံပေးပါဦးနော်ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:44 PMဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာက Internal SD နဲ့ External SD ပြသနာပါForce Close ဖြစ်ရတာက SD Card မကောင်းတာ ဒါမှမဟုတ်ဖိုင်တွေ ပြည့်သိပ်နေတာမျိုးကြောင့်ပါပြီးတော့ Ace2မှာ မမ်မိုရီ4GB ထပ် ပိုပြီး စိုက်လို့မရပါဘူးမနိုင်လို့ပါ ဒါကြောင့် ခုနက ပြောတဲ့ မမ်မိုရီ ကို တစ်ချက် စစ်ကြည့်လိုက်ပါDeleteReplyNay MyohtetDecember 9, 2012 at 3:59 AMကျွန်တော်ကဖုန်းမှာ(Huawei)U8818မှfree downolad အင်တာနက်မအသုံးဘူး ငါကမသိဘူး စိတ်ရှုပ်လုပ်...free downolad ဘယ်လို့ ကူညီပေးလုပ်လဲငါကဖုန်းမှာFaecbookနဲ့ free downolad အင်တာနက်မသုံးလဲReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 10, 2012 at 7:45 PMFree Download အတွက် မြန်မာမိုဘိုင်း က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ MMAM Market ကို အသုံးပြုပါဒီဆိုက်ရဲ့ ညာဘက်ဒေါင့်လေးက ပုံအပြာရောင်လေးမှာ ကလစ်နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ယူပါDeleteReplySuperuser40December 11, 2012 at 4:08 AMအစ်ကိုရေ ကျွန်တော့် computer က ဖုန်းကို fastboot ခေါ်ပြီး usb ကြိုးထိုးလိုက်ရင် driver မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ရိုးရိုးအချိန်မှာတော့ driver သိပါတယ် အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ဖြေပေးပါဦး....ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 17, 2012 at 12:07 AMFastbood ခေါ် ADB Driver ဟာ ဖုန်းတိုင်း ၀င်နေတဲ့အခါ Driver ကြောင်သွားတက်ပါတယ်..PC ရဲ့ Driver ဆက်တင်မှာ ၀င်ပြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..ဖုန်းလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကွန်ပြုတာ အခြေခံလေးလဲ ရှိသင့်ပါတယ်...DeleteReplyAnonymousDecember 14, 2012 at 6:20 PMmtarrot ဆိုတဲ့ ဖဲဗေဒင်လေးထွက်ပြီလို့ကြားတယ်အဲဒါလေးတင်ပေးပါလားဗျာReplyDeleteAnonymousDecember 16, 2012 at 1:56 AMအကိုရေ u8825d ics firm ware တင်ပေးထားတာယူလို့မရဘူအကိုအဆင်ပြေအောင်နောက်တခေါက်လောက်ပြောပြပါအုံး။ReplyDeleteRepliesသစ်ဆန်းခန့်December 17, 2012 at 12:09 AMခုပြန်တင်လိုက်ပါပြီ အဆင်ပြေနေပါတယ် ပြန်သွားကြည့်လိုက်မှာ ရှေ့စာမျက်နှာမှာတင်ရှိပါတယ်DeleteReplyAnonymousDecember 16, 2012 at 2:21 AMအစ်ကိုရေ sony xperia neo v ကို android version ics ကိုမြှင့်ချင်လို့ရမလားဆိုတာကျေးဇူးပြု၍ပြောပြပေးပါလား။ReplyDeleteAnonymousDecember 16, 2012 at 2:50 AMအစ်ကိုရေu8825d ရဲ့ အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးပါလား,ကျေးဇူးပြု၍.......ReplyDeleteအောင်မင်းသူDecember 17, 2012 at 9:07 AMကျွန်တော့်ဖုန်းက huawei u8661 ကို android version မြင့်တာ မြှင့်ချင်လို့ပါလာReplyDeleteအောင်သူလွင်December 18, 2012 at 3:27 AMအစ်ကိုရေ...ကျွန်တော့ Huawei U8825 က ဖုန်းက ဆက်လို့ရပြီး Message ပို့လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အရင်တုန်းက ပို့လို့ရတယ်။ Message Center Setting ကိုလဲ ၀င်လို့မရဘူး။ ဖုန်းကဒ်ကိုတစ်ခြားဖုန်းမှာ ထည့်ပြီးပို့လဲမရ။ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ သိရင်ပြောပြပေးပါဦးနော်။ ကျွန်တော့်မေးလ်က aungthulwin90@gmail.com ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာReplyDeleteRepliesAnonymousDecember 18, 2012 at 6:59 PMPhone အသစ်လဲလိုက်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။Deleteအောင်သူလွင်December 18, 2012 at 8:47 PMတစ်ခြားဖုန်းမှာ ထည့်ပြီးပို့လဲမရပါဘူးဆိုမှ ဖုန်းအသစ်လဲလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ တော်တော်စဉ်းစားပြီး ဖြေပေးထားတာဘဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖုန်းကဒ်ကဖြစ်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုကျွန်တော့်ဖုန်းက ဖုန်းအထွက်လဲရတယ်၊ အ၀င်လဲရတယ်။ စာပို့တာမှာဘဲ အ၀င်ရပြီး အထွက်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။ Message Center Setting ကိုဘယ်လိုချိန်းလဲ သိရင်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။ တစ်ခြားနည်းကောင်းလေးတွေ ရှိရင်လဲ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Deleteသစ်ဆန်းခန့်December 19, 2012 at 11:12 PMPhone အသစ်လဲလိုက်ပါဆိုတာ ကျွန်တော် ဖြေထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုအောင်သူလွင်အကယ်၍ ကိုအောင်သူလွင် ဖုန်းက Message Center Setting ရချင်တယ်ဆိုရင် Message ထဲကို ၀င်ပါ Menu ကို နှိပ်ပါSetting ထဲကိုသွားပါ Setting ထဲကနေမှ Message Center ချိန်းတဲ့နေရာမှာ +9595930014 လို့ ရိုက်ထည့်ပြီးဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပေးပါပြီး ရင် နောက်တစ်ခါ ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။Deleteအောင်သူလွင်December 20, 2012 at 3:53 AMအစ်ကိုရေ Message Center ချိန်းတဲ့နေရာမှာ 188144 က Default Numberအနေနဲ့ ၀င်နေတယ်။ ချိန်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါဦးနော်။ ပြန်ဖြေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ DeleteAnonymousFebruary 11, 2013 at 3:57 PMအောင်သူလွင်...keypad phone တစ်ခုခုနဲ့ပြောင်ပြီး message center ချိန်းကြည့်ပါ..+၉၅၉၅၉၃၀၀၀၃(သို့)+၉၅၉၅၉၃၀၀၁၄ ရိုက်ပြီး save ကြည့်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်DeletePyaePhone AungFebruary 21, 2013 at 1:05 AMmessage center ကတော့ GSM ဖုန်းတော်တော်များများကို ပြသနာပေးပါတယ် huawei android တွေမှာ တော်တော်များများက setting ၀င်ချိန်လို့မရပါဘူး အသေချာဆုံးက samsung android ဒါမှမဟုတ် nokia phone model အနိမ့်တွေမှာ ၀င်ချိန်ပြီး ပြန်ထည့်လိုက်ရင် ပြောင်းသွားတာတွေ့ရမှာပါ android တွေမှာတော့ ဒါလေးနဲ့စမ်းကြည့်ပါ *#*#4636#*#* ကိုဝင်ပြီး phone information ကိုဝင်ပါ ပြီးရင် အောက်ကိုဆွဲချပြီး SMSC box မှာ reflash လုပ်ကြည့်ပါ ဒါဆိုလက်ရှိဝင်နေတဲ့ message center ကိုပြပေးမှာပါ အခုနောက်ပိုင်း +9595930014 နဲ့အဆင်ပြေတာများပါတယ် ပြောင်းရိုက်ပြီး ပြန်ထွက်ပြီးတော့ message setting မှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါ ပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် samsung android တွေနဲ့ကတော့ လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ် huawei မှာက အကုန်မရတတ်ပါဘူး ဆရာအပေါင်းကို လေးစားလျက်DeleteReplyjokerDecember 19, 2012 at 6:40 AMအကိုရေ cwm ဖျက်နည်းလေးပြေားပြပါ့လား huawei u8818 မှာဖျက်ချင်တာပါဗျReplyDeleteRepliesjokerDecember 19, 2012 at 6:49 AMကျွန်တော့် mail က mr.smart1106@gmail.com ပါဗျ ဖုန်းဆက်ရအောင်အဆင်မပြေလို့ပါအကိုDeleteသစ်ဆန်းခန့်December 19, 2012 at 11:14 PMဖုန်းထဲက မမ်မိုရီကဒ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ဘတ်ထရီပါဖြုတ် ငါးစက္ကန့်နေရင်ပြန်ထည့်ပြီးVol Up + Vol Down + Power ပေါင်းနှိပ်ထားပါ စကရင်က ပန်းရောင်ဖြစ်သွားရင်ကွန်ပြုတာမှာ ကြိုးထိုးလိုက်ပါ Recovery ကို ကြိုက်သလို ၀င်ပြင်လို့ရပါပြီDeleteHuaweiMarch 30, 2013 at 7:21 AMU9200 မှာလည်းအတူတူပဲလား recover ကိုအရှင်းဖျက်လိုက်လို့ရလား လုပ်နည်းကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးလိုပါတယ် ကျေးဇူးတင်လျှက် (kso.ras1990@gmail.com)DeleteReplyAnonymousDecember 20, 2012 at 3:02 AMအကိုအကူအညီတခုလောက်တေင်းပရစေ,sony xperia neo vကိုroot ချိုးပြီးမြန်မာစာfont ထည့်နည်း software လေးတင်ပေးပါလား,တောင်းဆိုပါတယ်အကို,အကိုဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ။ReplyDeleteRepliesAnonymousDecember 21, 2012 at 6:04 AMညီလေး ဖုန်းကVERSION ဘယ်လောက်လဲDeleteAnonymousDecember 21, 2012 at 7:31 PMအကိုကျွန်တော်ရဲ့ android version 2.3.4 ပါ။DeleteAnonymousDecember 22, 2012 at 7:04 AMEasyroot toolkit နဲ့root လုပ်လိုက်ပါ ။ လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်။ ညီလေးgmailလိပ်စာပေးပါပြောပြမယ်DeleteAnonymousDecember 22, 2012 at 12:14 PMအကိုကျွန်တော်ရဲ့ gmail လိပ်စာက tunlay8@gmail.com ပါ။ကျေးဇူးပြု၍သေသေချာချာလေးပြောပြပေးပါအကို,ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို။DeleteReplyAnonymousDecember 20, 2012 at 3:13 AMU8825d ကို samsaung galaxy s3 room သုံလို့ရအောင်တင်ပေးထားတာ download ဆွဲလို့မရဘူးအကို error ဆိုပြီးပြနေတယ်။အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးအုံးအကိုတောင်းဆိုပါတယ်။ReplyDeleteAnonymousDecember 21, 2012 at 12:20 AMအစ်ကိုsamsung galaxy ace plus version 2.3.6 ကို 4. .. အထိမြှင့်လို့ရလားသိချင်ပါတယ် ။ရရင်ကျွန်တော်ကိုရှာပေးစေချင်ပါတယ်ReplyDeleteReplieskyaw lwan maungApril 17, 2013 at 6:42 AMhttp://www.thitsankhant.com/2013/04/samsung-galaxy-ace-plus-jelly-bean-421.htmlအစ်ကို ပြောတဲ့ ဟာလေးပါ...........Official တော့ မဟုတ်ပါဘူး custom ပါ ကျနော့်ဖုန်းမှာတော့ bluetooth ပို့ရင်း ကြောင်ကြောင်သွားတာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ် ..:D တစ်ခြား error တော့ မရှိဘူး တင်ကြည့်ပါ အဆင်မပြေရင် cwm က နေ ဖျက် stock firmware ပြန် တင်လိုက်ပါ .... DeleteReplyAnonymousDecember 21, 2012 at 2:21 PMMy phone is c8810 , and i can't sends or receive messages..... i want to know how to fixed it! ....there is no message center change option in my message setting ....plz help me.... thz bro!..ReplyDeleteAnonymousDecember 23, 2012 at 9:01 AMsamsung galaxy s advance အတွက် ဗားရှင်းမြှင့်လို့ရနိုင်သလေက်လေးတင်ပေးပါဦးအကိုရေ လက်ရှိဗားရှင်းက 2.3.6ပဲရှိလို့ပါ ဒီထဲသိတဲ့လူများလည်းကူညီပါဦး ရရင် Reply လေးလုပ်သွားပါဦး ReplyDeletemin min ooDecember 23, 2012 at 11:39 AMအကို သစ်ဆန်းခန့်အကို အထက်မှာ ပြောသလို ဖုန်းထဲက မမ်မိုရီကဒ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် ဘတ်ထရီပါဖြုတ် ငါးစက္ကန့်နေရင်ပြန်ထည့်ပြီးVol Up + Vol Down + Power ပေါင်းနှိပ်ထားပါ စကရင်က ပန်းရောင်ဖြစ်သွားရင်ကွန်ပြုတာမှာ ကြိုးထိုးလိုက်ပါ Recovery ကို ကြိုက်သလို ၀င်ပြင်လို့ရပါပြီလုပ်ကြည့်တာ ပန်းရောင် စခရင် တော့ပေါ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ ဘာမှ မပေးလို့ပါ chinese recovery ကနေ englishrecovery ပြောင်းချင်လို့ပါ။ အရေးကြီးလို့ ကူညီပါ။ အီးမေးက minminoo313@gmail.com ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ReplyDeletemin min ooDecember 25, 2012 at 7:38 AMအကို Custom rom ကနေ official ပြောင်းတင်တာ မရလို့ပါ။ံHuawei U8800-51 ကို XDA ကရတဲ့ 2.3.5 ပြောင်းလိုက်တှာုU8800 Pro ဖြစ်သွားပါတယ်။ အခု aurorra 4.0.4 ကို CMW နဲ့ တင်လိုက်တာဘလူးတု မရလို့ပါ။ ICS 4.0.3 U8800 pro official ရလို့တင်တာ မရလို့ပါ။ ပန်းရောင် စခရင်ဘဲပြနေပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပီး ဖြေပေးပါ။ReplyDeleteAnonymousDecember 26, 2012 at 2:00 AMအကိုရေအကူအညီတခုလောက်တောင်းပရစေ,google play store ထဲက applications တွေတခုမှ ဒေါင်းလို့မရဘူး error 403 ဆိုပြီးပြနေတယ် အဒါဘာကြောင့်ပါလဲ ကျေးဇူးပြု၍ပြောပြပေးပါအကို။ReplyDeleteသစ်ဆန်းခန့်December 27, 2012 at 7:29 PMအခု တလော ကျွန်တော် အလုပ်တွေ အရမ်းများသွားလို့ပါဖုန်းဆက်ပြီးလဲ မေးနိုင်ပါတယ်...အားလုံးကို အချိန်ပေးပြီး ဖြေပေးပါ့မယ်ReplyDeleteAnonymousDecember 29, 2012 at 1:52 AMအကို သစ်ဆန်းခန့် ရေ ကျွန်တော်လည်း google play store ထဲကapplication တွေဒေါင်းလိုမရတော့ဘူး,၂ ရက် ၃ ရက်လောက် ဘဲသုံးလို့ရတယ်,ကူညီပြီးဖြေပေးပါအုံးအကို။့ReplyDeleteAnonymousDecember 31, 2012 at 12:45 AMIPhone5 ကို ဘယ်နိုင်ငံက သွင်းတာလဲ သိချင်လို့ ဖုန်းဆက်မေးတာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့ ကိုသစ်ဆန်းခန့် ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်....အစ်ကို ပြောပေးတဲ့ဆိုဒ်ရဲ့ လင့်ခ်လေးပါ (http://iphonefrom.com/)ကျေးဇူးတင်လျှက်....ReplyDeleteAnonymousJanuary 1, 2013 at 10:59 PM mo mo speed tablet pattern lock ကျသွားတယ်..... usb Debugging on မထားမိဘူးဗျာဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပေးပါဦး.ReplyDeleteRepliesPyaePhone AungFebruary 21, 2013 at 1:19 AMတရုတ် tablet pc တော်တော်များများက recovery ကတခြားအလုံးတွေနဲ့မတူပါဘူး အများဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းနှစ်ခုကို ပြောပြပေးပါ့မယ် လုပ်ကြည့်ပါ တစ်ခုကပုံးမှန်အတိုင်းပဲ vol+ နဲ့ power တွဲနှိပ်ပြီး recovery ခေါ်တာပါ huawei stock recovery ပုံစံတတ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ ဆက်လုပ်တတ်မှာပါ နောက်တစ်ခုက vol- နဲ့ power တွဲနှိပ်ပြီး recovery ခေါ်တာပါ သူကျတော့ recovery ကတစ်မျိုးဗျ နံပါတ်စဉ်ရယ် တစ်ရုတ်စာရယ်တက်ပါတယ် ၀င်ပြီးနှိပ်လိုက်ရင် စက်ကို test လုပ်တာတွေပေါ်လာပါတယ် သူက နံပါတ် 2. တရုတ်စာကိုဝင်ပါ ပြီးရင် ဒုတိယ ကော်လံ နှစ်ခုစလုံးကိုဝင်ကြည့်ပါ စက် restart ကျပြီးပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ် နည်းနည်းကြာတတ်ပါတယ် ပါဝါကို မပိတ်ပါနဲ့ power key ကို short press လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ reset ကျနေပြီဖြစ်တဲ့ tablet pc လေးကိုတွေ့ရမှာပါ ဆရာအပေါင်းကို လေးစားလျက်DeleteReplyThuraJanuary 2, 2013 at 7:03 PM့Huawei T8620 root လုပ်လို့မရလို့ပါ။TpsparkyRoot.bat နဲ့လုပ်တာadb is not reconized as an internal and external command လို့ ပဲပေါ်နေတယ်။ source & debuging လည်း on ထားတယ်။ကူညီပေးပါဦး..........ReplyDeleteRepliesPyaePhone AungFebruary 21, 2013 at 1:23 AMt8620 က root လုပ်ရင် space bar လေးပုတ်ပေးရတာကလွဲလို့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး အလုပ်မလုပ်ဖူးဆိုရင် ကွန်ပျူတာက error တက်တာဖြစ်မှာပါ ဆရာအပေါင်းကိုလေးစားလျက်DeleteReplyAnonymousJanuary 3, 2013 at 6:22 PMhuawei U8661 ကို ics တင်ချင်လို့ရမလား ကူညီပါဦးအကိုReplyDeleteAnonymousJanuary 3, 2013 at 11:23 PMညီလေးရေ အစ်ကို့ရဲ့ bmorn v16 7"tablet screen lock ဖြစ်နေတယ် google account ထည့်လည်း ပြန်မပွင့်ဘူးကူညီပါဦး .......တာကောReplyDeleterolandJanuary 3, 2013 at 11:33 PMအကိုရေ samsung galaxy s3 official 4.1.2 လေးလိုချင်လို့ပါ။ တင်ထားတဲ့ဆိုဘ် တော်တော်များများက. လင့် တွေသေနေပြီ။ ရှာလို့မရလို့ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် mediafire ကနေတင်ပေးပါနော်။ အရေးကြီးလို့ပါ။ အားကိုးပါတယ်။ အကိုReplyDeleteNaymin ThuJanuary 4, 2013 at 7:47 AMကိုငယ်ရေ...ညီ HTC Explorer က Bluetoot က ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး..ညီသူငယ်ချင်းတွေက ညီဆီမှာရှိတဲ့ ဂီိမ်းတွေ app တွေ လိုချင် ရှယ်ယာလုပ်ရင် မရောက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်..Html View ဆိုပြီ ပြောနေတယ်... ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိဘူးအကို..ညီလဲ စိတ်ညစ်နေတယ် ... အချိန်လေးရှိရင်ပြောပြပေးပါအုန်းအကို..။နေမင်းသူ(သထုံသားလေး)nayminthu94@gmail.comReplyDeleteRepliesaung myo myatMay 1, 2013 at 7:25 PMzapya ကိုသုံးပေါ့DeleteReplybomaungJanuary 5, 2013 at 11:45 AMHuawei U8825D ROOT ဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် Handset ထဲတွင် SIM ကဒ် ထဲ့ထားရပါသလားReplyDeleteRepliesAnonymousJanuary 9, 2013 at 6:39 PMထည့်ထားလဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းလဲ u8825d ပါ sim card ပြီးလုပ်တာဘဲဘာမှမဖ်ြစပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့။DeleteReplyLwin PyinJanuary 6, 2013 at 12:29 AMကိုသစ်ဆနိးခန့် ရေ ကျတော့်ကို CWM ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ။ ရှင်းရှင်းပြောရ ရင် Firmware တခါမှ မတင်ဖူးပါဘူး။ ROM လဲ ပြောင်းချင်ပါတယ်။ Stetp by step လေး ရှင်းပြပါဦးဗျာ။ Normal user အဆင့်မို့ပါ။ Firmware မြင့်တာ ကွန်ပျူတာနဲ့ Join ရသေးလားခင်ဗျာ။ ကျနော်က apk ဖိုင်လေးတွေ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲ install လေးလုပ်။ ဒါပဲ တတ်တာပါ။ ကျနော်ဖုန်းက Samsung Glaxy Ace ရ်ုးရိုးပါပဲ . version 2.3.4 ပါ။ ICS ထိ တင်ချင်ပါတယ်။ Rom လဲ ပြောင်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး သည်းခံပေးပါ post တခုအနေနဲ့ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ lwinpyin.lonely@gmail.com ပါ ခင်ဗျာ။ အကို ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ လို့ReplyDeleteAnonymousJanuary 7, 2013 at 9:06 AMအကို သစ်ဆန်းခန့် ရေ ကျွန်တော့် U8825D ဖုန်းဖွင့်တာနဲ့ HUAWEI LOGO ပြီးတာနဲ့ Recovery Mode ထဲဘဲရောက်နေတယ်။ဆက်သွားရအောင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ ခင်ဗျာ။cupidwin@gmail.comReplyDeleteRepliesPyaePhone AungFebruary 21, 2013 at 1:27 AMဒီအတိုင်းသုံးနေရင်းဖြစ်သွားတာလား ဒါမှမဟုတ် software လုပ်ရင်းဖြစ်သွားတာလား တစ်ခါတစ်လေ volume ခလုပ်ညိနေပြီး ၀င်တတ်ပါတယ် recovery ကြောင့် လဲဖြစ်တတ်ပါတယ် ဆရာအပေါင်းကိုလေးစားလျက်DeleteReplyAnonymousJanuary 10, 2013 at 2:14 AMအကို XPERIA ARC/S JELLY BEAN 4.1.2 V06 VERY STABE AND NICE install လုပ်ပုံလေးကို ရှင်းပြပေးပါနော် ကျနော်အမျိူးမျိူးစမ်းပါတယ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာများလိုနေလဲမသိဘူး sony ဆိုတဲ့ logo ကိုမကျော်ဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပါနော်ReplyDeletesanathar layJanuary 12, 2013 at 1:16 AMကျွှန်တော့ ဖုန်းက huawei 8818 ပါ firmware upgrate လုပချင်လို့ပါ လုပ်ပုံလုပ်နည်လေးနဲ့ down ရမဲ့ sofeware လေး တင်ပေးစေချင်ပါတယ် sanathar4u@gmailကိုလဲပို့ လို့ရပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ReplyDeletesanathar layJanuary 12, 2013 at 1:18 AMကျွှန်တော့ ဖုန်းက huawei 8818 ပါ firmware upgrate လုပချင်လို့ပါ လုပ်ပုံလုပ်နည်လေးနဲ့ down ရမဲ့ sofeware လေး တင်ပေးစေချင်ပါတယ် sanathar4u@gmailကိုလဲပို့ လို့ရပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ReplyDeleteyekyawhtayJanuary 15, 2013 at 10:42 PMအစ်ကိုကျွန်တော် Huawei U8825d firmware တင်လိုက်တာUpdate exceptionEMMC is readonly, you con,t update your system.လို့ပေါ်နေတယ်... ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လို့ တင်ရမှာ လဲ ပြောပြပါအုံး....ReplyDeleteRepliesAnonymousFebruary 11, 2013 at 4:11 PMနောက်ဆုံးဗားရှင်းတင်ကြည့်ပါ B956 လေ (sd card fat32 format )DeleteReplyyekyawhtayJanuary 16, 2013 at 10:44 PMအဆင်မပြေဘူးအစ်ကိုရေ ကူညီပါဦuးpdate exceptionEMMC is readonly, you can't update your system. ဆိုတဲ့ error တက်နေလို့ဆက်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ် ကူညီပါဦးဗျာPhone က 3g logo မှာတန့်နေလို့ firmware ပြန်တင်တာပါခင်ဗျReplyDeleteRepliesAnonymousJanuary 19, 2013 at 7:43 PMကျွန်တော်လည်း EMMC is readonly, you can't update your system. ဆိုတဲ့ error ပဲတက်နေတယ်။ ကယ်ပါဦးကိုသစ်ဆန်းရေDeletePyaePhone AungFebruary 21, 2013 at 1:30 AMကျွန်တော်လဲဖြစ်ဖူးတယ်ဗျ box နဲ့ချိတ်ပြီးပြန်လုပ်လိုက်တာ ရသွားတယ် ဆရာအပေါင်းကိုလေးစားလျက်DeleteAnonymousMarch 18, 2013 at 5:49 AMty765ijw46837otukuyketkDeleteAnonymousMarch 18, 2013 at 5:57 AMကိုပြည့်ဖုန်းအောင်ရေDeleteAnonymousMarch 18, 2013 at 5:59 AMEMMC is Readonlyဖြစ်နေတယ်ဗျာ ကူညီပါဦး အကို့ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲPlsDeleteAnonymousMarch 18, 2013 at 6:02 AMကျွန်တော့်Ph က09423662806,09450005660ပါ Mailကboy.2009.2010@gmail.comပါအကို့ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ အကိုကူညီပေးပါဦးDeleteReplyzaygyiJanuary 22, 2013 at 9:57 PMညီလေးမေးချင်တာက google play က game တွေကInstallတန်းလုပ်ခိုင်းတာ ဘယ်လိုလုပ်ရတာလည်း ပြောပြပေးပါအုံး ဘာတွေလိုပါလဲ နောက်ပြီးmmasက တစ်ချို့ဟာတွေက download မရဘူး နောက် mmasကို update ဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲ နောက်massageက်ုcolour နဲ့ပို့လို့ရပါသလား အမြဲအားပေးလျှက် lionman003@gmail.comReplyDeleteAnonymousJanuary 22, 2013 at 10:09 PMညီလေးမေးချင်တာက google play ကနေGame တွေကို install လုပ်ရင်ဘာလိုပါသလဲနောက်mmasကအချို့ဟာတွေက download လုပ်ရင်မရဘူး ညီလေးဖုန်းက huawei u8818ပါ ဆိုးတာက mmas က ကင်မရာ sowfware တော်တော်များများ download လုပ်ရင် error ဖြစ်နေပါတယ် ပြောပြပါအုံး lionman003@gmail.comပါ အမြဲအားပေးလျှက်ReplyDeleteRepliesAnonymousJanuary 22, 2013 at 11:45 PMUse your brainလမ်းဘေးက model phone တွေမသုံးနဲ့ပေါ့DeleteAnonymousFebruary 23, 2013 at 5:38 PMအဲ့တာ ဆိုဒ် error ပါအကို အဲကို anonymous ရေ မသိလို့မေးမယ်နော် အကို လမ်းလယ်ခေါင်ကဖုန်းအမျိုးအစမားလေးပြောပါ့လား ကျွန်တော်ကိုင်ချင်လို့ပါ DeleteReplyAnonymousJanuary 22, 2013 at 10:35 PMsamsung galaxy ace s5830 boot မတက်ဘူး recovery ကနေ reboot လုပ်ရင် ပြန်တက်တယ် ဒါပေမယ့် computer နဲ့ချိတ်လို့မရဘူး power off ပြီးပြန် power on ရင် boot မတက်တော့ဘူး downloading mode ဝင်ပြီးcomputer နဲ့ချိတ်လို့မရဘူး ကူညီပါအုံးReplyDeletetuntunJanuary 24, 2013 at 8:28 AMအကိုရေ riff box ဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ လိပ်စာသိချင်ပါတယ်ReplyDeleteRepliesAnonymousFebruary 11, 2013 at 4:04 PMmobile fun လမ်း၅၀အထက်ဘလောက် ရန်ကုန်DeleteReplyကောင်းမြတ် သူJanuary 25, 2013 at 5:39 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteAnonymousJanuary 27, 2013 at 8:59 PMှုIMEI NO ပျောက်သွား၇င် ဘယ်လိုပြန်ခေါ်၇မလဲ..............ReplyDeleteRepliesAnonymousFebruary 11, 2013 at 4:14 PMfirmware ပြန်တင်မှရမယ်(no imei >no service)Deletedr.chatgyi.blogspot.comFebruary 16, 2013 at 10:34 AMG300 U8815 နဲ့ G300 U8818 firmware ချင်းတူပါသလာDeletePyaePhone AungFebruary 21, 2013 at 1:35 AMThis comment has been removed by the author.DeleteReplyAnonymousFebruary 1, 2013 at 11:32 AMကျေးဇူးပြု၍ ဖြေ ပေးကြပါ။ ကျွန်တော်က အသစ်ပါ ။ T8620 အတွက်viberထည့်တာ zipဘယ်လိုဖြည်ရမယ်ဆိုတာမသိလို့ပါ။အပြည့်အစုံပြော ပေးရင်တော့ အတိုင်းအထက်အလွန် ပေါ့။zawmyoone@gmail.comReplyDeleteRepliesAnonymousFebruary 11, 2013 at 4:16 PMAndro ZIP.apk install DeleteReplyAnonymousFebruary 3, 2013 at 6:12 AMမင်္ဂလာအစ်ကို ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဆိုက်ကိုတွေ့တာမကြာသေးဘူး သုံးလေးရက်ပဲရှိသေးတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ firmwere တစ်ချို့ကို အစ်ကို့ဆိုက်မှာရရှိသွားတယ်။ထို့ထက်ပိုပြီး Firmwere ပြုလုပ်နည်းတွေ၊နောက်ပြီး Root လုပ်နည်းတွေပါ ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ဆက်ပြီး ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ။ ReplyDeleteAnonymousFebruary 3, 2013 at 6:16 AMchinese ရဲ့ Tablelt Firmwere လေးတွေ၊ Firmwere ရေးနည်းလေး သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ReplyDeleteAnonymousFebruary 3, 2013 at 9:53 AMအစ်ကို ကျွန်တေတာ့ Glaxy tab 7".0 model no က GT-P6200 Version က 3.2 ပါ Jelly Bean တင်လို့ရလားဟင် ရလို့ရင် အသေိးတ်လေးပြောပေးပါအစ်ကို Email က zztlittlebaby@gmail.com ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ReplyDeleteAnonymousFebruary 9, 2013 at 11:14 PMကျနော်facebookအကောင့်လုပ်ချင်လို့လုပ်မတတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပေးပါ။ပြီးတော့fun club လဲလုပ်ချင်လို့ပါ။အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါနော်။အရေးကြီးလို့ပါEmailကmoehtet.czn@gmail.comပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ReplyDeleteMg LwinFebruary 12, 2013 at 1:46 AMuawei y310 recovery file ပျောက်သွားလို. flash လုပ်လို. မရလို ကူညီ ပါfirmwre ရေး ဖို .recovery ၀င် ရင် white screen ဇြစ်နေလိုofficial website မှာကိုက update.zip ပဲ ရတယ် update.appမရဘူးReplyDeletekyaw zinFebruary 14, 2013 at 6:25 AMအစ်ကိုကျေးဇူးပြု၍ပြောပြပေးပါကျွန်တော့်ဖုန်းကhuaweiu8825ပါgoogleplaystoreကappsများကိုdownloadလုပ်မရဘဖြစ်နေပါတယ်searchboxမှာlockဖြစ်နေပါတယ်ချက်ချင်းပြန်ကြားပေပါReplyDeleteMg LwinFebruary 14, 2013 at 6:52 AMအကိုရေ download တော. ဆိဲပြီး သွားပြီ ဘယ်လိုflashလုပ်တာလဲ official website မှာ ပြတဲ.အတိုင်း လုပ်တာပဲ recovery ထဲဝင် .zip ဖိုင် ကိုရွေး တာ ပဲ recovery ၀င်ရင်white screen ပဲ ဖြစ်နေလို. တခြားနည်းလမ်းလေးကူညီပါReplyDeleteAnonymousFebruary 17, 2013 at 8:10 PMHuawei Ascend P1 U 9200 ကို Official Firmware B124 ကို volume + Volume – and Power နှိပ်ပြီးတင်တာ original recovery ထဲပဲရောက်ရောက်သွားလို့ ကူညီကြပါဦးခင်ဗျာ ။ဖုန်းက CWM Recovery လဲမတင်ရသေးပါခင်ဗျာ။Firmware မတက်တော့လို့ပြန်တင်တာပါ။ReplyDeleteWin HtutFebruary 18, 2013 at 2:00 AMကျွန်တော့ရဲ့ဖုန်းက SONY ERICSSON NEO V ပါအင်တာနက်ကVIDEOတွေ ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပေးပါလား အရင်ကကြည့်ရတယ် ခုမှကြည့်မရတာ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်ReplyDeleteAnonymousFebruary 18, 2013 at 6:34 PMfpse and bios.zip ကဖုန်းထဲမှာဘယ်လိုinstall လုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာနဂို gameboid ရှိရင်ကောဆော့လို့ရလားခင်ဗျာplaystation 1 ကအကိုတင်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေကိုလေကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါနော်ReplyDeleteAnonymousFebruary 18, 2013 at 6:41 PMgpk file က laptopထဲမှာinstallလုပ်မရပါခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလို့ရှင်းပြပါကျေးဇူးတင်ပါသည်ReplyDeletePyaePhone AungFebruary 21, 2013 at 3:01 AMအစ်ကိုရေ U8950-1 ကို offline နဲ့ root လုပ်လိုက်တာ bluetooth မရတော့လို့ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ bootloader unlock လုပ်ဖို့ကလဲ သူ့မော်ဒယ်ပါမလာဘူးနော် rom လဲမရှိဘူးဗျ ဘယ်မှာဒေါင်းရမလဲ rom ပြန်တင်ရင်အဆင်ပြေပါ့မလား ကျွန်တော့ အီးမေးလ်က pyaephoneaung@gmail.com ပါReplyDeletekhinmgtunFebruary 21, 2013 at 7:20 AMအကိုရေ lenovoa789 firmware လိုချင်လို့ပါ ဘယ်မှာဒေါင်းရမလဲမသိလို့ ကျေးဇူးပြုရ်ကူညီပါအုံး။khinmgtun1008@gmail.comReplyDeleteRepliesPyaePhone AungFebruary 28, 2013 at 12:33 AMhttp://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1899245DeleteReplyAnonymousFebruary 22, 2013 at 8:10 AMအကိုရေsamsung galaxy s2 skyrocket i727ကဖုန်းထွက်ရပြီးဝင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်အကိုအဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်မလဲခင်ဗျာ........ပြင်ဆိုင်ကိုပို့လိုက်ရင်ပိုက်ဆံတွေမတန်တဆတောင်းလို့ကူညီပါဦးအစဉ်အားပေးလျက်......ReplyDeleteAnonymousFebruary 22, 2013 at 8:17 AMဖုန်းအ၀င်ပဲရပြီးအထွက်မရဘုးဖြစ်နေတာပါအကို...ကူညီပေးပါဦးReplyDeleteAnonymousFebruary 23, 2013 at 9:23 PMအကို ကျွန်တော့်ဖုန်း Huawei U8950D မှာ real football 2012 နှင့် 2013 ကစားလို့မရလို့ပါ gmailလိပ်စာက aungzaymyo.azm@gmail.comပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ReplyDeleteAnonymousFebruary 25, 2013 at 11:48 PMအကိုရေgalaxy ace version 2.3.6ကိုdownload ဆွဲပြီးပါပြီversion ဘယ်လိုတင်ရမလဲမသိလို့helpReplyDeleteNaing Aung LwinFebruary 26, 2013 at 1:53 AMအစ်ကိုရေကျွန်တော့်အရင်ဖုန်းထဲမှာ viber ထည့်ပီးသုံးတာအဆင်ပြေတယ့် handset လဲတော့back မလုပ်ပဲ deactivate လုပ်ပီး reset ချလိုက်တယ်အခု handset အသစ်မှာ viber ဆော့ဖ်ဝဲ install လုပ်တာ code မပေးတော့လို့ဗျကူညီပါဦးနော်NaL ReplyDeleteAnonymousFebruary 26, 2013 at 9:42 PMအစ်ကိုရေကျွန်တော် samsung galaxy ace GT - s5830i လေး flash update တင်ပြီး battery ဖြူတ်လိုက်တာ ဘာမှာတက်မလာလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပါဦး ဆိုင်ကတော့ hardbirck ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပဲgmail လိပ်စာက koaungko.mc@gmail.com ပါReplyDeleteAnonymousFebruary 28, 2013 at 6:35 AMအစ်ကိုရေကျွန်တော့် huawei phone မှာ original contact store.apk ဖျက်လိုက်မိလို့ contact တွေမှတ်မရတော့ဘူး။အခြားsoftware တွေထည့်လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ်။Original ပြန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဖြေပေးပါဦးsunwild2022@gmail.comReplyDeleteAnonymousMarch 5, 2013 at 1:11 AMအစ်ကိုရယ် USSD code ကို ဘယ်လိုဖွဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါလဲနောက်တစ်ခု က ussd ဘယ်လို မျှဝေသုံးနိုင်ပါလဲReplyDeleteAnonymousMarch 5, 2013 at 1:59 AMhttp://www.winkabarkyaw.net/ မှ apk တွေကို ဘယ်လို ဒေါင်း ရပါလဲReplyDeleteAnonymousMarch 7, 2013 at 6:08 AMအ၀င်ရပြီးအထွက်မရတာ အထွက် call အားအုံးကို ဘလော့လုပ်ထားလို့ပါ java ဖုန်းတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်ReplyDeleteAnonymousMarch 7, 2013 at 6:43 AMအချိန်မအားလပ်သော ကိုသစ်ဆန်းခန့် နှင့် တခြားမန်ဘာဝင်များအားကူညီသောအားဖြင့် သိရှိလိုသမျှမေးပါ မသိရင်မသိ/သိရင်ဖြေကြားပေးပါမည်သင်တို့၏မေးခွန်းတိုင်းသည်ကျွန်တော့အတွက် တိုးတက်မှုလမ်းစပင်ဖြစ်သည်atinsi90@gmail.comအောင်အောင်ပြည်မြို့၊ကမ်းနားလမ်းReplyDeleteAnonymousMarch 14, 2013 at 2:19 AMအကိုသစ်ဆန်းခန့်...samsung galaxy nexus အတွက် 4.2 version ထွက်သလားသိချင်ပါတယ်...ထွက်ရင်တင်နည်းလေးနဲ့ firmware ကိုတင်ပေးစေချင်ပါတယ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...နောက်ပြီး...Riff box အပြင်အခြား tool box တွေအကြောင်းလဲလုပ်နည်းလေးတွေပြပေးပါဦးလို့တောင်းဆိုပါတယ်...အကို...ဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေ..။ReplyDeletekothurein lwinMarch 16, 2013 at 12:58 AMကျွန်တော်တင် ဖူးသ လောက်တော့တူပါတယ်ကို။u8818မှာတော့ 8815Rom တွေတင် ဖူးပါတယ်။errorမတွေ့ပါဘူး။အဆင်ပြေပါတယ်။ReplyDeletekothurein lwinMarch 16, 2013 at 1:14 AMအကို ရေ Lenovo S880i ရဲ့ Rom တင်နည်းတွေCWMတင်နည်းလေးတွေပြောပြ ပေးပါခင်ဗျာ။နောက်ပြီး driver တင်နည်းလေးလဲသိချင်ပါတယ်အကို.Lenovo တခါမှမကိုင်ဘူးလို့ပါ။အားကိုးပါတယ်အကို။ လေးစားလျက်...ReplyDeleteMr.nyoMarch 16, 2013 at 10:10 AMအကိုရေ ကျွန်တော့် tablet model က softwinerEvb ပါ logo မှာရပ်နေလို့ ကူညီပါအုံး။firmware ပြန်တင်ရမှာဆိုရင်လည်း ရှာပေးပါအုံး။ recovery mode လည်းဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ကျေးဇူးပါ။ReplyDeletechitsonekunglayMarch 16, 2013 at 11:35 PMhiအကိုရေ ကျွန်တော်.huawei,u8950d ကအီးမေးအကောင်.sync မရဘူးဖြစ်နေပါတယ် ဖြစ်နိုင်မဲ့နည်းလေးကျေးဇူးပြုပီး ကူညီပါအုံးအကို။ReplyDeleteReplieskyaw lwan maungApril 17, 2013 at 11:37 AMroot ပြီးသားဆို root explore ထဲကနေ ...data>>>>system>>>accounts.bd ကို ဖျက်ပါ ပြီးရင် ဖုန်းကို reboot လုပ်လိုက်ပါ g mail acc ဖျက်သွားပါမည် ... settings ထဲ ၀င်ပါ accounts and sync >>>> အကောင့်ထည့်ပါ ...auto-sync ကို အမှန်ခြစ်လိုက်ပါ ... :)DeleteReplysaiyareyint thihanMarch 19, 2013 at 9:40 PMအကို ကျေးဇူးပြုပြီး huawei u8650 2.3.4 ရဲ့ root လုပ်နည်းလေးတင်းပေးပါဦး....ReplyDeleteRepliesaung myo myatMay 1, 2013 at 7:39 PMz4rootနဲ့အဆင်ပြေမှာပါDeleteReplyAnonymousMarch 24, 2013 at 3:04 AMi can't enter into recovery mode after doing factory reset from CWM recovery.is root delected by making factory reset?ReplyDeleteAnonymousMarch 24, 2013 at 7:23 AMuser application ကနေ system application ကိုပြောင်းလို့ရတဲ့ APK လိုချင်လို့ပါReplyDeleteAnonymousMarch 26, 2013 at 6:58 PMညီမဖုန်းကU8825Dပါဝzagi installerကိုနှိပ်မိပြီးမြန်မာဖောင့်ပျက်သွားလို့ဆိုင်သွားပြတာပန်ယူလာတော့စာလုံးတွေကnormalဆိုဒ်ကိုအကြီးကြီးဖြစ်နေပြီး စာလုံးတွေကအောက်ပိုင်းပျက်နေတယ်။စယူလာတုန်းကဆိုrebootခဏခဏကျတယ်အခုတော့rebootတော့မကျတော့ပါဘူး။ဒါပေမယ့်ဖုန်းကကြောင်နေတယ်ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးသုံးရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးကူညီပါဦးReplyDeletewinkokoMarch 28, 2013 at 4:45 AMအကို p1 u9200ရဲ့ recovery modeထဲ ဝင်မရလို့ ဘယ်လိုဝင်ရလဲပြောပြပါအုံးReplyDeleteAnonymousMarch 28, 2013 at 6:32 AMsamsung galaxy gio gt-s5660ကိုနဂိုfirmwareတင်တာပါဝါ တက်ပြီ..samsung logoပဲပေါ်ပြီးဆက်မလာတော့ဘူး....တင်နည်းလေးပြောပြပေးပါနော်...အခုကျွန်တော်ကjellybean 4.2.1တင်ထားးတာwifi hotspot လွှင့်မရလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျ....custom cm10.1တင်ထားတာပါခင်ဗျာ............ReplyDeleteAnonymousMarch 30, 2013 at 5:39 AMogg file ဖွင့်မရလို့ReplyDeleteHuaweiMarch 30, 2013 at 7:41 AMU9200 cwm recover ကိုအရှင်းဖျက်လိုက်လို့ရလား cwm နဲ့ fiemware တင်မရလို့ပါ dload ကိုတော့မြင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဖိုင်မရှိဘူးပဲပြောနေတာ် vol+ & vol- & power နဲ့တင်ရင်လည်း recovery ထဲပဲရောက်သွားတယ် မရောက်ရင်လည်း power ပိတ်ပြန်ပိတ်သွားတယ် လုပ်နည်းကို အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးလိုပါတယ် ကျေးဇူးတင်လျှက် (kso.ras1990@gmail.com)ReplyDeleteAnonymousMarch 31, 2013 at 6:58 AMအကို ရေ ကျွန်တော့ဖုန်း twz 303 က power on လိုက်ရင် logo ခဏပဲတတ်ပြီး power off သွားပါတယ်။ အဲဒါ software ကြောင့်လား hardwareကြောင့်လား မသေချာဖြစ်နေလို့ပါ။ software ဆိုရင် ကိုယ်ကိုတိုင်ပဲ ပြန်သွင်းကြည့်ချင်လို့တဆိတ်လောက်ကူညီပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ReplyDeleteReplieskyaw lwan maungApril 17, 2013 at 11:23 AMfirmware ပြန်တင်လိုက်ပါ... :) DeleteAnonymousApril 21, 2013 at 10:14 AMfirmware ပြန်တင်တာက ပြသနာမဟုတ်ပေမဲ့ အဲဒိ firmware ဘယ်မှာရှာရမလဲ ရှိနေမလဲ link လေး တဆိတ်လောက်ကူညီပါ။ ဖြစ်နေတာတော်တော်လဲကြာနေပြီလေDeleteReplyAnonymousMarch 31, 2013 at 7:04 AMadb ကို သုံးချင်လို့ အကိုတို့ ရေ။ အဲဒါ အသေးစိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါဦးReplyDeleteThawZinWinMarch 31, 2013 at 8:21 PMအကို ကျွန်တော် note2၀ယ်ထားပါတယ် သို့ပေမယ့် မြန်မာစာလုံးတွေ တချို့ထပ်နေပါတယ် အကို ထပ်တဲ့ အခါ Space ခြားရိုက်ရပါတယ် စလုံးမထပ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိပါ အကိုသိရင် လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါနော် အကို့ကို ထာဝရ လေးစားလျှက်ပါReplyDeleteReplieskyaw lwan maungApril 17, 2013 at 11:22 AMs3 နဲ့ Note2jelly bean မှာ မြန်မာစာ မအိုကေသေးပါ :(DeleteReplyAnonymousApril 1, 2013 at 3:10 AMgame တစ်ချို့ကို download ဆွဲတာ zippy share ဆိုတဲ့ file နဲ့ဘဲရတယ် အစ်ကို၊ အဲဒီ game ကညီ့ဖုန်းမှာဆော့ မရဘူး အစ်ကို၊အဲဒီ zippy share ကဘာလဲ ဘယ်လို့ဆော့လို့ရအောင် လုပ်ရမလဲ ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါခင်ဗျာReplyDeleteaungmyo heinApril 3, 2013 at 1:13 AMHUAWEI C8812 firmware download zipfile လည်းရခဲ့ပါပါပြီဒီ့အတွက်လည်းပျေးဇူးများစွာပါ။ဒါပေမယ့်firmware zipfile ကြီးရှိပြီးfirmware ပြန်တင်နည်းက မသိတော့ မျောက်အုန်းသီးရတဲ့အတိုင်းဘဲပေါ့အသုံးဝင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာဒါကြောင့် firmware ဘယ်လိုတင်တယ်ဆိုတာ အဆင့်ဆင့်လေးပြောပြေးပါအုံးလားခင်ဗျာကျနော်က firmware ရပြီးကတည်းက လက်တည့်စမ်းချင်နေတာကြာပြီဗျပြောရင်းနဲ့ လက်တွေတောင်ယားလာပြီမြန်မြန်လေး လက်အယားပြေစေဖို့ကူညီပေးပါအုံးReplyDeleteReplieskyaw lwan maungApril 17, 2013 at 7:01 AMFirmware ကို တင်ချင်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ အစ်ကို ....င်္Firmware zip ထဲမှာdload ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေး ပါလား အစ်ကို ..sd card ကို format ရိုက်dload ဆိုတာလေးကို ထည့်.. တစ်ခြား ဘာဖိုင်မှ ရှိမနေရပါဘူး ...ပြီးရင် ဖုန်းပိတ်လိုက်ပါ.. vol up+vol down ကို နှိပ်ပြီး ပါဝါ ဖွင့်လိုက်ပါ ခဏစောင့်ပါ firmware auto update လုပ်ပါလိမ့်မယ်...ပြီးအောင် စောင့်ပါ ဖုန်း reboot ကျပြီး ပြန်အတက်မှာ နည်းနည်းကြာပါလိမ့်မယ် ပြန်တက်လာရင် အိုကေပါပြီ ... DeleteReplyAnonymousApril 7, 2013 at 6:04 AMY.210နှင့်Y310c rootလုပ်နည်းလေးပေးပါခင်ဗျာReplyDeleteArkar HeinApril 7, 2013 at 9:22 AMအကိုရေ.. ကျွန်တော့်ဖုန်းက Samsung S2 GT-I9100 ပါ.. ဖုန်းက ပါဝါ ပိတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ..ပါဝါပိတ်လိုက်ရင် ချက်ချင်း ပြန်ပွင့်လာပါတယ်...ပြီးတော့ ဘက်ထရီကလည်း အားသွင်းကြိုးဖြုတ်ထားတာကို အားသွင်းသလိုဖြစ်နေပါတယ်...အားသွင်း ကြိုးမတပ်ထားပဲနဲ့ အားသွင်းလိုက် ပြန်ဖြုတ်လိုက် လုပ်သလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ... အဲဒါလေး ကူညီပါဦးနော်...ReplyDeleteReplieskyaw lwan maungApril 17, 2013 at 6:47 AMအကောင်းဆုံးကတော့ hard reset (factory reset လုပ်လိုက်ပါ .....)အဲ့တာနဲ့ မှ အဆင်မပြေသေးရင် firmware ပြန်တင်ပါ သူ့အတွက် firmware ကတော့ အများကြီးပါ အဆင်ပြေတဲ့ ဟာကို ပြန်တင်ပါhttp://www.myanmarmobileapp.com/2013/03/10/samsung-galaxy-official-firmwares-2/DeleteReplyKyaw ThihaApril 8, 2013 at 5:29 AMကျွန်တော့် U8950D -B939 ကို custom rom တင်ချင်တယ်အစ်ကို၊ပြန်ပြောပေးပါအုံး၊rom buckup လုပ်တာလဲကျွန်တော်သိပမရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်၊အဲဒါလဲရှင်းပြပေးပါအုံး။ကျွန်တော် rom ကိုbackup လုပ်တာ boot.img,recovery.img,system.est4.dup ဆိုပြီးရတယ်။အဲဒါ custom rom တင်လို့ တစ်ခုခု error တက်ရင် ဒီ ၃ခုနဲ့ restore ပြန်လုပ်ရင်ရလားအစ်ကို၊ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါအုံးကိုခန့်ရေkyawthiha.kth1@gmail.comReplyDeleteAnonymousApril 8, 2013 at 11:03 AMအကိုရေ ကျွန်တော့် ipad2version 6.1.3အတွက် jailbreak လုပ်နည်းနဲ့ မြန်မာဖောင့်တင်နည်းလေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်လေး သိချင်ပါတယ် ကူညီနိုင်ပါက ကူညီပေးစေလိုပါတယ် အကို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦးReplyDeleteKyaw LayApril 8, 2013 at 12:59 PMအကိုရေ Huawei C8813 Unlockcode ပြန်မလာလို့ပါဗျာ 10 ရက်ကျော်နေပါပြီ တခြား ဘာနဲ့များ Root ရင်ရလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါခင်ဗျာReplyDeleteoctminkhong93April 11, 2013 at 11:54 AMကိုသစ်ရေ mediaclip app ကနေmtvတွေဒေါင်းတာတစ်နေ့ကထိတောင်ရသေးတယ်မနေ့ကစပြီးဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး။connection ကြောင့်လား?တစ်ခြားဟာတွေကပုံမှန်ဒေါင်းလို့ရနေတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။ကူညီပါဦး။ReplyDeleteတင်ထွန်း ဦးApril 13, 2013 at 7:29 PMကျွန်တော့်ဖုန်းကိုVersion 4.2.2 မြင့်လိုက်တာအခု setting ထဲမှာ Developer option မပါတော့ဘူးအကို......ဖုန်းနဲူ့လက်တော့နဲ့connect လုပ်လို့မရဘူးအကို...ကူညီပါဦးအကို...rockerlay1996@gmail.comReplyDeleteReplieskyaw lwan maungApril 17, 2013 at 6:51 AMပါပါတယ် ဗျ ... settings>>>about phone>>>build number ကို ၇ ခါ နှိပ်ပါ ..ပြန်ထွက်ပါ developer option ပေါ်ပါပြီ... အဲ့ထဲ ၀င်လိုက်ပါusb debugging ကို တွေ့ပါပြီ...DeleteReplykyaw lwan maungApril 17, 2013 at 7:05 AMအစ်ကို တို့ သိလိုသမျှ ကိုလဲ user.amazing@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.... အစ်ကိုတို့ မေးမြန်းတဲ့ အခါ ကျနော့်မှာ ပညာရပါတယ် ကျေးဇူးတင်လျက် လေးစားလျက် :D ReplyDeleteHeineKoApril 19, 2013 at 1:11 PMဖုန်းပြောရင် ကိုယ့်အသံကို သူများမှတ်မမိအောင် မိန်းကလေးအသံ (သို့) ယောင်္ကျားလေးအသံ (သို့) သက်ကြီးပိုင်းအသံ ပြောင်းလို့ရတဲ့ android app တွေမရှိဘူးလားခင်ဗျ nokia ဖုန်းတစ်လုံးမှာ တွေ့ဖူးလို့ပါ အဲ့ app လေး လိုချင်လို့ လိုက်ရှာနေတာဗျာ ဘယ်လိုမှရှာမတွေ့လို့ သိရင် link လေး ချိတ်ပေးပါအုံး ကိုဂျူနီယာရယ်။ReplyDeleteAnonymousApril 21, 2013 at 10:10 AMအကိုရေ china android phone တွေ firmware ဘယ်မှာရနိုင်မလဲမသိဘူး အထူးသဖြင့် R7100 GPRS အမျိုးအစားပါ ကူညီပေးပါဦးReplyDeleteAnonymousApril 22, 2013 at 1:49 AMအကိုရေhuaweiu8661androidversionလေးမြင့်ချင်လိုပါကူညီပါအကိုReplyDeleteAnonymousApril 23, 2013 at 12:15 PMအကို ကျွန်တော်ဖုန်းက huawei u8950d ပါ official firmware jelly bean တင်ချင်လို့ပReplyDeleteAputu AungApril 26, 2013 at 8:29 PMကျွန်တော် data file နဲ့ game တွေတင်ကြည့်တာမရလို့ပါ၊ကျွန်တော့်ဖုန်းက xperia U ပါ။ကူညီပါအုံးဗျာReplyDeleteAputu AungApril 26, 2013 at 8:36 PMကျွန်တော် Root with Restore by Bin4ry တွေလိုချင်လို့ပါ။တင်ပေးပါအုံးဗျာ။ပီးတော့ Xperia U ကို ICS တင်ပြီးတော့ root ကြည့်တာမရလို့ပါ။ReplyDeleteAnonymousApril 29, 2013 at 2:52 AMကျွန်တော် Asphalt7heat apk ကို တင်တာ တင်လို့မရလို.ပါ ။ ကျွန်တော့် ဖုန်းက HUAWEI-U8825 ပါ။ReplyDeleteAnonymousMay 4, 2013 at 5:41 AMChina Tablet လေး firmware ကြောင်သွားလို့ all in one firmware for china tablets လေး ပေးပါလား။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ReplyDeleteAnonymousMay 6, 2013 at 5:38 PMအကို...ကျနော်...china tablet GEMEI အတွက် USB Driver ရချင်လို့ပါ...ကူညီပေးပါဦး...မော်ဒယ်က G2 ပါ...OS က2.3.4 ပါ..။ကျနော့်အကောင့်က ...jhonmin07@gmail.com ပါ။ကျေးဇူးပါနော်အကို။ReplyDeleteMichealJailBreakMay 8, 2013 at 2:21 AMကျွန်တော့် ရဲ့ဖုန်း huawei ascend G510-0010 B173 ကို root လုပ် လိုက်တာ ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ နောက် ပိုင်းမှာ ဖုန်း က sound လဲ မလာဘူး နောက် ဖုန်း လဲ ဆက်လို့ မရတော့ ဘူး အဲ ဒါ ဘယ် လို ဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတာ သိချင်လို့ ပါ ပြော ပြပေးပါခင်ဗျား software ကြောင့် လား hardware ကြောင့် လား နောက် ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုပါ တဆိတ်လောက် အကြံ ဥာဏ်လေး ပေးပါ ခင်ဗျ။ReplyDeleteNyi Nyi AungMay 8, 2013 at 5:33 AMအကို ခင်ဗျား လေးစားစွာဖြင့် အကူအညီလေး တောင်းပါရစေခင်ဗျာhuawei T8620 ICS version 4.0.3 မှာ google play store သွင်းတာunfortunately google play has stopped ဖြစ်နေတာ ဘယ်လို လုပ်ရပါ့မလဲ ခင်ဗျာapp တွေလဲ setting ထဲ သွားပြီး clear cache တွေ force stop တွေ လုပ်တာလဲ မရဘူး ဖြစ်နေတယ် reset factory လဲ လုပ်ပီးပီ ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ ကူညီပေးပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာReplyDeleteAnonymousMay 8, 2013 at 10:33 AMအစ်ကိုပေးထားတဲ့ Viber voice code activation လွယ်လွယ်တောင်းမယ် ဆိုတာကို ဖွင့်ပြီးလုပ်တာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်. .. ကူညီဦး This is the number you entered to use with Viber: အဲ့ဒါကြီးပဲပေါ်နေတယ်u8825 မှာ ဗိုင်ဗာဗားရှင်းအသစ် V_3.0.0.1686 ကိုဒေါင်းတာ အင်စတော လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဘာလို့ လဲမသိဘူးသိရင်ပြောပေးပါဦးReplyDeleteKomyo MyintMay 8, 2013 at 9:05 PMy310 ကို y220 က pac နဲ့ root လိုက် မိ လို့ boot မတက်တော့ဘူး ဘယ် လို ပြန် လုပ် ရမ လဲ help !ReplyDeleteKomyo MyintMay 8, 2013 at 9:07 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteAnonymousMay 9, 2013 at 12:54 AMအစ်ကို ကျွှန်တော် HUAWEI U8825Dအခု တင်ထားတာက်firmware B972ပါfirmware B951 ကို ပြန်ဆင်းချင်ပါတယ် အဲ့ဒါ လုပ်နည်းလေးပြောပြပေးပါ အစ်ကိုReplyDeleteAnonymousMay 10, 2013 at 1:47 AMလေးစားရသောအစ်ကိုခင်းဗျား..ကျွန်တော်မသိလို့တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ..cwm ဆိုတာဘာကိုပြောတားလည်းခင်ဗျား....cwm ကိုဘာဖြစ်လိုဖျက်ကြတာလဲခင်ဗျား....ပြီးတောrecover နဲ့ cwm ကအတူတူဘဲလား..custom rom နဲ့ offical rom နဲ့ကဘာများကွာပါသလဲခင်ဗျား...နောက်တော့ rom နဲ့ firmware နဲ့ကအတူတူမဟုတ်ဘူးလား.....ကျွန်တော်အဲဒီကြားထဲမှာ ပတ်ပတ်လည်နေလို့ပါ ကူညီပြီးနဲနဲလောက်ရှင်းပြပါနောအစ်ကို..နောက်တစ်ခုက ဖုန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် recover keys တွေကိုးဘယ်မှားရှာရမှာလည်းခင်ဗျား.......အများဆုံးလေ့လာလိုရတဲ့ ဆိုဒ်လေးတစ်ခုလောက်ပြေားပြပေးပါခင်းဗျား..ReplyDeleteAnonymousMay 12, 2013 at 1:25 AMကိုသစ်ဆန်းခန့်ရေ ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ G510 မှာ wifi မရတော့လို့ firmware လည်းပြန်တင်ပြီးပြီ မရဘူး။ စ၀ယ်တုန်းကတော့ ရတယ်၊ နောက်မှ မရတော့တာ။ ဆိုင်သွားပြကြည့်တော့ hardware ပိုင်းကဖြစ်တာတဲ့ ရန်ကုန်မှာဘဲ ပြင်လို့ရမယ်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကနယ်ကပါ။ အဲဒါပြင်လို့ရနိုင်လား သိချင်လို့ပါ။ Gmail account = kokyawsoe81@gmail.com ပါ။ReplyDeleteAnonymousMay 13, 2013 at 7:37 AMအကိုရေ ကျွန်တော့် ဖုန်း က HUAWEI C8650 ပါ ။ unpacking ဖြည်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အားလုံးပြီးလို့ Restart ကျသွားတဲ့ အခါ မှာ screen logo မတက်တော့ ပဲ white screen ပဲ ပေါ်နေလို့ ပါ အကို ။ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ် အကို ။ ကျေးဇူးပါ ။ အကို အချိန်ရတဲ့အခါ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ် ခင်ဗျာ ။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ReplyDeletequicklykmh2012May 13, 2013 at 9:43 PMအကိုရေကျွန်တော်ဖုန်းကhtc butterflyပါအဲ့ဒါနဲ့ကိုကညီတဲ့ဂိမ်းတွေဘယ်မှာရှာရမှာလဲအကိုReplyDeleteAdd commentLoad more...
Samsung Galaxy S2 GT I9100 ICS 4.0.4 FULL
Huawei G300 U8818 Firmware
Huawei C8600 Firmware
Super One Click 2.3.3 (Android Root)
Itools (All Apple Device Support)